Isikhenkcisi esijiyileyo kabini, iChina Double spiral freezer Abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-iSquare Technology Group Co., Ltd.
Isikhenkcezisi esisezantsi somoya onamagubu aphindwe kabini aveliswe yiTeknoloji yeTeknoloji siyasebenza kukukhenkceka okukhawulezileyo kokutya okutyibiliziweyo kunye nokutya okuncinci, ukutya okungumkhenkce okukhulu, njengokutya okulungiselelwe, inkukhu iphelele, kunye nentlanzi iphela. Igubu eliphindwe kabini kwindawo efrijini efakwe ngaphakathi kwaye ithengisiwe ngaphandle, isenza ukuba kube lula ukusebenza kunye nokuthelekisa ngcono imigca yemveliso yabathengi.
● Isikhenkcezisi esijikelezayo sixhotyiswe ngomophuko ococekileyo osebenza kakuhle, kusetyenziswa indlela yokubonelela ngolwelo yakutshanje, eyenza ukuba ubushushu butshintshe ngaphezulu kwe-20% ngaphezulu kuneziqandisi zesintu.
●Isikhenkcezisi esijikelezayo sisebenzisa uyilo olujikelezayo lwendlela yokuhambisa umoya ehambelana kwaye igudileyo eyonyusa isiphumo sokutshintshiselana ngobushushu.
●Siya kuxhobisa ngebhanti enemigca engenanto yeplastikhi kunye nebhanti yeemodyuli zebhanti kunye nefriji yokujikeleza ngokweemfuno ezahlukeneyo zeemveliso ezahlukeneyo.
●Ifriji yomoya ixhotywe ngenkqubo yolawulo lwendawo ekrelekrele, ukufunyanwa okuzenzekelayo kunye nesixhobo sokukhanya sealamu, esilungele abasebenzisi ukuba basebenze kwaye basigcine.
Amanqanaba ama-2 ukuya kuma-40
Indawo ebiyelweyo engenayo i-125mm / 150mm Iindonga ze-polyurethane ezinqamlekileyo, ukukhanya kwangaphakathi, ulusu olungenasici. Findawo ebiyelweyo ene-ully iyazikhethela.
Grade ukutya mesh ibhanti okanye ibhanti yeplastiki emodyuli
I-520 ukuya kwi-1372 mm
500 ukuya 4000 mm
Umbane welizwe lasekuhlaleni
Iphaneli yokulawula ebiyelweyo
Iphaneli yokulawula engenasici
Ulawulo lwe-PLC, isikrini sokuchukumisa, ukhuseleko boluvo
IFron, iAmmonia, i-CO2
Iityhubhu zensimbi ezingenasici, ialuminium fin, iindawo zokugqibela eziguqukayo, abalandeli bexesha elide
-40℃ ukuya -45 ℃
4 ukuya kwintengiso ye-200 mmzichanekile
Iimveliso ze-Ice Cream
Iziqhamo kunye neMveliso zoLimo